सिन्धुलीका कोरोना संक्रमित आइसोलेसनमा भर्ना, अस्पतालका सबै सेवा सुचारु : RajdhaniDaily.com sharethis
सिन्धुलीका कोरोना संक्रमित आइसोलेसनमा भर्ना, अस्पतालका सबै सेवा सुचारु
सिन्धुली । सिन्धुलीका कोरोना संक्रमितलाई सिन्धुली अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । जिल्लामा बुधबार एकजनामा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि उनलाई विहिबार विहान आइसोलेसनमा भर्ना गरी उपचार सुरु गरिएको छ ।
भारतबाट आई कमलामाई नगरपालिका वडा नं. १४ मा रहेको जनता मावि चन्दनपुरमा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेका २३ वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको थियो । संक्रमित व्यक्ति भारतबाट आई क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । उनको प्रादेशिक अस्पताल हेटौडामा आरटिपिसिआर विधिबाट परिक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
संक्रमित व्यक्तिलाई एम्बुलेन्समा सिन्धुली अस्पताल ल्याई आइसोलेसनमा उपचार सुरु गरिएको सिन्धुली अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका कोभिड १९ फोकल पर्सन डा. प्रसन्नजंग राजभण्डारीका अनुसार उनको स्वास्थ्यमा कोरोना भाईरसको कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन । उनी सामान्य अवस्थामा छन् ।
यसैबीच सिन्धुली अस्पतालले अस्पतालको नियमित सेवामा कुनै प्रभाव नपर्ने जनाएको छ । कोरोना संक्रमितलाई सुरक्षित तरिकाले उपचार गरिएकाले सबै खाले सेवा सुचारु रहेको डा. राजभण्डारीले बताएका छन । उनले त्रासको वातावरण नबनाउन र बिरामीको उपचार निर्वाध रुपमा गराउन सबैमा अनुरोध गरेका छन् । अस्पतालमा ओपिडी, इमर्जेन्सी, प्रसुति लगाएतका सबै सेवा नियमित रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन ।
क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीले कन्ट्रयाक ट्रेसिङको काम सुरु गरेको छ । क्वारेन्टाइन क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीसहितको टोली जान थालिएको स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।
शुक्रबार हुने अन्तर्राष्ट्रिय यूवा उद्ममी महासंघको उदघाट्न तयारी अन्तिम चरणमा
एमालेको महाधिवेशन र आचारसंहिता
प्रोफेसर मियाँको ‘मैले देखेको कतार’ सार्वजनिक
सात बुँदे सहमतिपछि जनकपुरधामकाे निषेधाज्ञा हटाइयो
लहानमा किशोरी बलात्कृत, आरोपी फरार
घनश्याम भुसालले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने
देवघाट दर्शनकाे लाेभ देखाएर माहाधिवेशन उद्घाटनमा
रौतहटको अग्रगामी विरासतलाई माथि उठाउँछौँ: प्रभु साह
रियल टाइम पिसिआरमा प्रयोग हुने किट ल्याउने तयारी
वरीयतामा नेपाल यथावत
सुत्केरी बोकेको एम्बुलेन्स खोलामा